Iholide kwi-Yurt Camp ALMALUU - I-Airbnb
Iholide kwi-Yurt Camp ALMALUU
Tong, Ysyk Kol Province, Kyrgyzstan
Intente sinombuki zindwendwe onguEugen
Hlala kwiyurt yokuqala yaseKyrgyz. Ilula kodwa ithambile kakhulu.
I-A yurt likhaya loonothwal' impahlana abakuMbindi weAsia. Enye yeempawu zayo ezikhethekileyo yimilo yayo engqukuva, engaboneleli kuphela ukuxhathisa umoya kodwa kwakhona, uxolo nokhuseleko. Wamkelekile kwiKyrgyzstan entle!
«Ethno Village Almaluu» ndihlala ndivuya ukukubona.
Ilali yethu ye-Ethno ifumaneka kumgama oziikhilomitha ezisi-7 ukusuka kwilali yaseBokonbaevo kwingingqi ye-Issyk Kul 15 min uhamba ukusuka elunxwemeni. Indawo echanekileyo inokufunyanwa kwimephu (IZIQULATHO EZIYI-SENSITIVE HIDDEN) ngokuchwetheza igama "Ethno village Almaluu".
Kwisidlo sakusasa selali yase-Ethno ifakiwe kwixabiso legumbi lakho le-yurt. Kwakhona ukuba ufuna ukuba nesidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa singakhonza ngentlawulo eyongezelelweyo. Isidlo sasemini yi-450 som ( malunga ne-7 $) kunye nesidlo sangokuhlwa kunye ne-450 som.
Kuhlala kukho iti eshushu yasimahla, isonka esitsha, ijam kunye nobusi ukuze ube lula kwi-yurt-cafe.
Singakunika imisebenzi elandelayo ngexesha lokuhlala kwakho kwinkampu yethu yeyurt.
Mininzi iminyhadala yenkcubeko neyemveli apho unokubandakanyeka kubomi bokwenyani baseKyrgyz. Ukuba siqala kufuneka sithethe ngamahashe eKyrgyz. Siququzelela imidlalo ye-nomad. Ibandakanya imidlalo yehashe emi-4. Ezi “kok bory”, “kyz kuumai”, tyiyn enmei” kunye ne “eer oodarysh”. Le midlalo yenye imidlalo esemthethweni World Nomad Imidlalo. Ukuba unomdla ekukhweleni ihashe emva koko lixesha elifanelekileyo kunye nendawo yokuyenza. Silungiselela ukhenketho (ukuhamba, ngemoto kunye nokubuya ngamahashe) usuku olunye nangaphezulu. Nangona kunjalo, ukuba ukhetha ukwazi ngakumbi malunga nesiko laseKyrgyz ke sicebisa ukuba undwendwele ilali yaseKyzyl-Tuu apho unokubona ukuveliswa kweyurt kunye neenkqubo zokwakha. Apho uya kuthenga ithuba. Ukutyelela kwiworkshop yeFelt-Art Studio kunye nokuthatha inxaxheba kwiiklasi ezizivayo kunye noKunduz Asanakunova. Lithuba lokuvelisa esakho isikhumbuzo esizivayo, kwaye uthenge izinxibo zentloko zobuhlanga/ezinxitywayo, iivesti, iilokhwe kunye nezikhafu zesilika eziveziweyo. Ngokuhlwa sikunika intsomi yaseKyrgyz ukuba uyafuna. Imalunga nengoma yaseKyrgyz kunye nomdaniso okhatshwa sisixhobo sekyrgyz njengekomuz, ooz komuz, chopo choor nezinye. Ngaphezu koko, kunokwenzeka ukuba uzame isakhono sokudubula kunye nokuzingela okwenyani kunye nokhozi kunye ne-2 taigans (izinja zokuzingela). Ihlala malunga neeyure ezi-6-8 ezintabeni. Kwaye sineendaba ezilungileyo ezivela kwi-2016 ngonyaka; I-sauna ehambayo, yisauna kwivili eyenziwe ngokutsha kwi-sauna ngaphakathi kwesithuthi somkhosi i-GAZ-66. Ngokuqhelekileyo siqhuba ukuya ezintabeni, emachibini, emfuleni nakwezinye iindawo apho ukhetha ukubona khona. Kwakhona nantsi i-sauna/banya kwinkampu yeyurt.
4.81 · Izimvo eziyi-57
Umbuki zindwendwe ngu- Eugen
Iilwimi: Deutsch, Русский
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tong